အမရေ... ပထမဆုံး ကွန်မန့်ရေး ခွင့် ရလို့..ပျော်လိုက်တာ...
၃ နှစ် သမီး ကြီးပေါ့။ ရွှေအိုနု ရောင် ဖျော့ ဖျော့ ..အလင်း ဆုံး အချိန် မှာ..အလှဆုံး ပြုံးပျော်.. ရွှင်လန်း နိုင်ပါစေ လို့။ မိသားစု နဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဘ၀ လည်း..ညီမျှ..လှပ နိုင် ပါစေ။ မိဘ ဆွေမျိုး..မိတ်သဟာ တွေ နဲ့..မြန်မာ ပြည် ကြီး ထဲ မှာ..စည်ဗျောသံဝေ နိုင် ကြပါစေ။ ပုသိမ်..မော်တင်စွန်းကိုလည်း...ကျမ တို့ တွေ ကို..လိုက်ပို့ နိုင်ပါစေ။
Happy B'Day, Ma Khin Min Zaw.
Happy Birthday အန်တီ .. ။ တစ်ဘ၀လုံး ပျော်ရွှင်မှုမြောက်မြားစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ .. ။ အေးမြတဲ့ လအရိပ်လို ဘ၀မျိုးနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ နေရောင်ခြည် ဘ၀မျိုးမှာ ချစ်ခင်တဲ့ မိဘ ၊ ဆွေမျိုး ၊ မောင်နှမ ၊ ခင်ပွန်း ၊ သားသမီးများနဲ့ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ .. ။ ဘ၀မှာ အဖြစ်ချင်ဆုံး ရည်မှန်းချက် .. စိတ်ကူးစိတ်သန်းအားလုံးလည်း အောင်မြင်နိုင်ပါစေရှင် .. ။
Happy Birthday to you! ၄၃ နှစ် မွေးနေ့မှသည် ဘ၀တလျှောက်လုံး ကျန်းမာရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဆထက်တပိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Happy Birthday to 43 !
I'm 34 :P
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ...ဆိုတာနဲ့ အပေါ်က ကော်မန့်တွေအတိုင်း ဆက်ဆုတောင်းပေးတယ်လို့ မှတ်ပေးပါ။ :)
အမတယောက်လို ချစ်ရတဲ့ အမ ... ၄၃ နှစ်ပြည့်မှ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သောမိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်ပြီး ယုံကြည်တဲ့လမ်းမှာ အားမာန်အပြည့်နဲ့ ဆက် လျှောက် လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ။
လိုအင်ဆန္ဒ တလုံး တ၀ အပြတ် အသတ် ထဲထဲဝင်ဝင် အင့်နေအောင် ပြည့်ဝပါစေ အမရေ
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ အန်တီ...
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ အစ်မရေ။း)
Happy Birthday, Ma Khin Min Zaw. May all wishes come true!
ကြယ်နှစ်စင်း ရဲ့ ၄၃
၄၃ တဲ့ …
ဆန့် ကျင်ဖက် နှစ်ခုက
သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ …ရင်းခဲ့..
အမုန်းတွေ၊အရှုံးတွေ နဲ့ 
ဆုံးခဲ့တာတွေ ဆုံး ပြီးတဲ့ နောက်
အပြုံးတွေ နဲ့ လှနေတဲ့မနက်ဖန်
ရွှေပြည်တော် ရဲ့လမ်းတိုင်းကို
တရားမျှတ လွတ်လပ် ခြင်း သာလိုတာမို့ 
ဟောဒိ ၄၃ မှ…သည်..
အတူ …ဆုမွန် ချွေလိုက်မယ်…
ဤမြန်ပြည်တခွင် ... ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း…..
(အမမေငြိမ်းနှင့် မခင်မင်းဇော် အတွက်မွေးနေ့ အမှတ်တရ)
မွေးနေ့ ဆုတောင်း အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်နော်.. အင်း... ကျမက ဘလော့လောက ထဲမှာ အကြီးတန်း ဖြစ်နေတော့(အသက်ပြောတာနော်) ဒီထက်မကတဲ့ ကောမန့်တွေ ၀င်မယ်ထင်နေတာ...
အိ အိ ... အင်း ခုတော့လဲ ဒီလောက်နဲ့လဲ ကျေနပ်ပါတယ်လေ နော်....ဟဟ
ဘာရမလဲ .. စီဘောက်ထဲက ဆုတောင်းတွေပါ အကုန် ဆွဲထည့်ပစ်လိုက်မယ် .. ကိုင်း လာလေရော့.....
TZA: နောက်ကျသွားတယ်အစ်မ.. မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ။ :)
hta2: happy birthday makhin min zaw
Ko Toe: Happy Birthday------- You areamy comrade since in Pathein.
Nanda: Happy Birthday ပါအမ မွေးနေ့အမှတ်တရ ပိုစ့်လေးကနေ မိဘကျေးဇူးကိုမမေ့တဲ့ စိတ်လေးကိုဝမ်းသာကြည်နူးစွာဖတ်ခွင့် ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
မေအိခင်: အမ ဟတ်ပီးဘတ်ဒေးပါအမကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့ အမေ နဲ့အဖေ ကိုကျမအလေးပြုပါတယ် တော်လှန်ရေးအတွက် ဘ၀တစ်ခုလုံးကိုပေးဆပ်ရဲတဲ့ ပွင့်လင်းရိုးသားတဲ့ဂုန် ရှိတဲ့ သမီးမြတ်ကိုမွေးပေးခဲ့တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
20 Jun 08, 05:49
Boyz: မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ...။
May Nyane: beloved friend, tomorrow is yr Birthday, i can't publishapost for you... i'm on trip.... but i miss you and......... HAPPY BIRTHDAY.................WITH YOUR LOVELY 2...
မခင်မင်းဇော်........ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဘွယ် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေသတည်း။ (ဒီ စနေ နဲ့ တနင်္ဂနွေမှာ အန်တီစု မွေးနေ့အခမ်းအနားအတွက် လုံးပမ်းနေရတဲ့အတွက် အင်တာနက်မကိုင်ဖြစ်ဘဲ...ဆုတောင်းနောက်ကျသွားမိပါတယ်။)
အမရေ ... မမှီတမှီဖြစ်သွားတယ် ... ဆောရီးဗျာ
အမ မျှော်လင့်ယုံကြည်မြတ်နိုးရတဲ့ အမိနိုင်ငံသစ်မှာ လွတ်လပ်အေးချမ်းသော စိတ်နဲ့ကိုယ် ... အမြန်ဆုံး ဖြစ်ပါစေသား
၃ - ၄ ရက် လောက်အတွင်း အင်တာနက်ကြည့်ချိန် သိပ်မရလိုက်တော့ လွတ်သွားတယ်။ အမနဲ့ မမေငြိမ်းကို လက်ဆောင် ပုံရုပ်ဆိုးဆိုးလေး ကြိုပေးပြီးသားနော်။ အဟဲ။
အမရေ ကြားဖူးတာတော့ကြာပြီ..အခုမှပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တော့တယ်...Happy birthday anyway... အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေဘာပဲလုပ်လုပ်မှန်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးကိုကြိုက်တယ်
မွေးနေ့မှာ ဘာမှလဲ ကျွေးဘူး အဟွန့်...
E-မုန့်လေးတောင် မတင်ဘူး အမက ကပ်စီးနဲတယ်..
ဟိဟိ .. ကောမန့် မျှော်တယ် ဆိုလို့ ကောမန့် အရင် ပေးတာ...
HAPPY BELATED BIRTHDAY ... ပါ အမရေ.. May all kinds of blessings in the world fill your desires !!! နောက်ကျမှ မွေးနေ့ ဆုတောင်း ပေးနိုင်တဲ့ ဒီညီမလေးကို နားလည် ခွင့်လွှတ် နိုင်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ် ;P
တွေ့မှပဲ မုန့်ကျွေးခိုင်းပြီး မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပေးတော့မယ် နော်..
အတော်လေးကို နောက်ကျနေပေမယ့် အမှတ်တရလေး ဖြစ်အောင် ဒီမှာ တစ်ခါ ထပ်ပြီး ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ မမေငြိမ်း ဘလော့မှာတော့ ဆုတောင်းပေးထားတယ်။
ခလုတ်မထိ ဆူးမငြိ ရည်မှန်းရာ ပန်းတိုင်ကို အရောက် လှမ်းနိုင်ပါစေ... မတရုတ်မရေ... အဟီး...
မွေးနေ့ကို မဟားဒယား နောက်ကျပြီးမှ ဆုတောင်းရတာ ခွင့်လွတ်ပါရှင်.. တစ်ကယ် လာဆုတောင်းချင်တာ ကိုနတ်ရှင်က မလာရဘူးလို့ တားထားလို့လေ... ခုတော့ မရတော့ဘူး သူစိတ်ကောင်းနေတုန်း အမအရလာတာ..
43 ဆိုတော့ အန်တီ ခေါ်ရမလား မမခေါ်ရမလား
အန်တီ မမပဲ ကောင်းပါတယ် .. အဟိ